Gariigga oo sheegtay in dad muhaajirin ah ay ku dhinteen xeebaha Dalkaasi | Baydhabo Online
Gariigga oo sheegtay in dad muhaajirin ah ay ku dhinteen xeebaha Dalkaasi
Dowladda Dalka Gariigga ayaa faah-faahin dheeraad ah ka bixisay dad muhaajiriin ah oo ku dhintay xeebah aDalkeeda,saraakiisha Ciidamada Ilaalada xeebaha ee dalka Giriigga ayaa sheegaya in ugu yaraan 14 qof oo muhaajiriin ah oo ay ku jiraan afar caruur ah ay badda ku dhinteen kadib markii dooni ay saarnaayeen ku degtay badda u dhaxeeysa Turkiga iyo Greek-gga,kuwaasi oo ku sii jeeday Qaaradda Yurub.
Wararka ayaa sheegaya in doonida ay saarnaayeen dad kor u dhaafaya labaatan qof,iyadoo dadkaasi qaarna weli lala’yahay,balse Waxaa socoda baadi goob loogu jiro dadkaasi,sida ay sheegayaan ilaalada Xeebaha Gariiga.
Dimitris Vitsas oo ah Wasiirka socdaalka ee Wadanka Giriigga ayaa sheegay in dalka Greek-gga uusan raali ka ahayn kana noqon doonin in ay dadka ku dhamaadaan jasiiradda Aegean,oo ah halka ay maraan tahriibayaasha doonaya in ay u gudbaan Yurub inteedi kale.
Wasiirku Waxaa uu intaasi ku daray in xalka kaliya ee lagu xakameyn karo muhaajiriinta uu yahay in la soo saaro taalabooyin laga qaado dadka wax tahriibiya,kuwaas oo muhaajiriinta ka caawiya wadooyinka ay maraan.
Midowga yurub ayaa sheegay in sanadkii hore ay aad u yaraayeen muhaajiriinta sharci darrada ah ee ka tallaabo soohdimaha wadamada yurub tan iyo markii ay biloowdeen musiibada tahriibeyaasha afar sano ka hor.
Midoowga yurub ayaa heshiis la sixiiday 2016-kii taas oo sababtay in uu aad u yaraato tirade dadka u gudba Geek-gga,balse waxaa muuqata in aanu jirin weli wax isbedel ah oo ku yimid arrinkasi.